Geeduhu ma CAQLI ayay leeyihiin?!! (Bal u kuurgal cibaaradan) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Geeduhu ma CAQLI ayay leeyihiin?!! (Bal u kuurgal cibaaradan)
Geeduhu ma CAQLI ayay leeyihiin?!! (Bal u kuurgal cibaaradan)
(Hadalsame) 07 Luulyo 2019 – Geeduhu caqli noo muuqad ma leh. Laakiin waxay leeyihiin farsamooyin ay ku faafiyaan iniinyahooda oo aad mooddo inay si cilmiyaysan u qorsheeyeen.
1. Geedaha qaar waxaa iniinyahoodu ku dhex jiraan miraha macaan ee dadka, xoolaha iyo shinbiruhu cunaan. Iniinyuhu waxay ku jiraan dahaar adag oo aan caloosha nooluhu shiidi karin oo waxay mar dambe ka soo baxaan neefkii ama shinbirtii cuntay. Kolley qaar ka mid ah noolayaasha sii qaada iniinyahaas ayaa meel geedku ka soo bixi karo gaarsiiya. Ogow xayawaanka saaladiisu waa nafaqo oo iniintu nafaqadaas ayey ku dhex baxaysaa. (tusaale waxaa u ah miraha miyiga dhulkeena ka baxa oo badan)
2. Qaar kale waxay iniinyaha ku dhex ridaan ubax khafiif ah oo dabayshu qaadi karto oo meel fog gaarsiin karto. Sidaas ayaa iniinyahaas badan qaarkood u sii tarmiyaan geedka. (Tusaale waa dandelions)
3. Qaar kale oo ka baxa saxaaraha, iniinyuhu waxay ku dhex baxaan laamaha geedka oo markii geedku qallaalo, kulligiis ayaa dabayshu qaaddaa oo markii uu meel ku dhacaba waxaa ka soo daata iniinyo. Meelaha uu sii marayo geedka meel uun ka mid ah ayaa bacrin geedku ku kori karo leh. (Tusaale: tumbleweeds)
4. Geedaha u dhaw biyamareenada iniinyahoodu waxay u samaysan yihiin inay sabbayn karaan ilaa muddo cayiman ka dibna ku degi karaan biyaha oo soo bixi karaan. (Tusaale: Yellow flag, sea mint)
5. Waxaa jira geedo iniinyahooda ku rida gal duuban oo markii roobku yimaado oo dhibic biyo ah ku dhacdo galkaasi qarxo oo firdhiyo iniinyihii. Biyaha iyo ciidda oo qoyan ayaa iniintii ku dhex dhacdaa (Tusaale: Himalayan Balsam). Waxaa kaloo jira qaar galka ay iniinyaha ku ritaan biyo ku sita oo markii iniinyuhu diyaar yihiin galku hoos u dhaco oo iniinyihii iyo biyihii oois wata soo daataan. (Tusaale: Exploding Cucumber)
Dambcan geeduhu wax ma qorsheeyaan. Dan gaar ah oo ugu jirta in tafiirtoodu sii jirtona ma muuqato. Waxaa keliya oo meesha ku jiraa waa in awood ka sarraysa ay qorshaysay in geeduhu muhimadda ay nolosha kale u leeyihiin sii jirto oo aanay dabar go’in.
Previous articleGOOGOOSKA: Brazil vs Peru 3-1, Algeria vs Guinea 3-0 (Brazil oo hanatay Coppa America)
Next articleMaxaa ka cusub sheekada yaabka leh ee Deeqa? (Warkii ugu dambeeyay)